Isku qor internetka - Iskuulka Luqadda Dhexe, Cambridge
Fadlan buuxi ama hubi dhammaan meelihii loo baahnaa!
Haddii aad jeclaan lahayd inaad iska diiwaangeliso Dugsiga fadlan fadlan:
Buuxi foomka hoose iyo codsigaaga waxaa loo diri doonaa dugsiga.
Bixinta deebada (toddobaadka 1 ee koorsada iyo kharashyada hoyga iyo ku dallacaadda qiimaha guriyeynta haddii ay khuseyso) waxaanan buuggaaga ku qori doonaa oo aanu dejin doonnaa hoy.
Waanu xaqiijin doonaa koorsadaada iyo hoygayaga markaan helno deebaajigaaga oo kuu soo dirno Warqad Aqoonsi. Ardayda aan EU-da ahayn waxay u baahan doonaan tan si ay u helaan fiisaha gelitaanka UK.
Meelaha lagu calaamadiyay (*) ayaa loo baahan yahay.
Fadlan noo sheeg magacaaga!
Fadlan noo sheeg magacaaga Magaca ama Magacaaga!
Booskani waa loo baahan yahay.
Input aan saxnayn
Magaalada / Magaalada:*
Gobolka / Gobolka / Gobolka:
Zip / Code boostada:*
Fadlan dooroAfghanistanÅland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaJacaylkuAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBolivia, State of PlurinationalBonaire, Sint Eustatius iyo SabaBosnia iyo HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilTerritory British Indian OceanBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral African RepublicChadChileShiinahaChristmas IslandCocos (rukuucda) IslandsColombiaComorosCongoCongo, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ahCook IslandsCosta RicaCote d'IvoireCroatiaCubaCuracaoCyprusCzech RepublicDenmarkJabuutiDominikaDominican RepublicEcuadorMasarEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaItoobiyaFalkland Islands (Malvinas)Faroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFaransiis PolynesiaFaransiis Southern DhulalkaGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiIsland maqlo iyo McDonald IslandsQuduuska Fiiri (Vatican City State)HondurasHong KongHungaryIcelandHindiyaIndonesiaIran, Republic of IslamicCiraaqIrelandIsle of ManIsraa'iilItalyJamaicaJapanJerseyUrdunKazakhstanKenyaKiribatiJamhuuriyadda Korea, Democratic People eeKorea, Republic ofKuwaitKyrgyzstanJamhuuriyadda Lao Dadka DemocraticLatviaLubnaanLesothoLiberiaLiibiya ee CarabtaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMakedoniya, Jamhuuriyadii hore ee YugoslaviaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaIslands MarshallMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Federaalka ahMoldova, Republic ofMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayCumaanPakistanPalauTerritory Falastiin, deganPanamaPapua New GuineaParaguayPeruFilibiinPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQadarReunionRomaniaRussian FederationRwandaSaint BarthelemySaint Helena, loosoo iyo Tristan Da CunhaSaint Kitts and NevisSaint LuciaSaint Martin (Part Faransiis)Saint Pierre iyo MiquelonSaint Vincent iyo Grenadines ayaaSamoaSan MarinoSao Tomé iyo PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint Maarten (Qaybta Nederland)SlovakiaSloveniaJasiiradaha SolomonSoomaaliyaKoonfur AfrikaSouth Georgia iyo The Islands rooti SouthSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard iyo Jan MayenSwazilandIswidhanSwitzerlandSuuriya Arab RepublicTaiwan, Gobolka ShiinahaTajikistanTansaaniya, United Republic ofThailandTimor Leste-TogoTokelauTongaTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurkiga oo Caicos IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesBoqortooyada IngiriiskaUnited StatesUnited States Islands furid MinorUruguayUzbekistanVanuatuVenezuela, falal lidi ku Republic ofKa taagnaayeen colaado sababayVirgin Islands, BritishVirgin Islands, USWallis iyo FutunaWestern SaharaYemenZambiaZimbabwe Booskani waa loo baahan yahay.
Fadlan gali cinwaankaaga emailka oo buuxa, tusaale ahaan, name@example.com. Lambarka taleefankaaga iyo cinwaanka emailka laguma wadaagi doono cid saddexaad. Macluumaadkaaga waxaa ilaalinaya Nidaamkayaga Qarsoodiga ah.
Xaqiiji cinwaanka emailkaaga:*
Booskani waa loo baahan yahay. Fadlan calaamadee, waxay la mid tahay meelaha kor ku xusan.
Magaca xiriirka deg dega ah:*
Fadlan sheeg magaca qof aan xiriiri karno marka xaalad degdeg ah jirto. Tani waxay noqon kartaa xubin qoys ama saaxiib.
Telefoonka xiriirka deg dega ah:*
Fadlan bixi lambarka taleefanka ee xiriiriyaha gurmadka.
Maalinta01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 / Month010203040506070809101112 / Year1900190119021903190419051906190719081909191019111912191319141915191619171918191919201921192219231924192519261927192819291930193119321933193419351936193719381939194019411942194319441945194619471948194919501951195219531954195519561957195819591960196119621963196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204220432044204520462047204820492050 Input aan saxnayn
Shaqo / Xirfad:
Fadlan noo sheeg sida aad markii hore noogu ogaato*
Halkan waa inaad noo sheegtaa nooca kooraska aad rabto inaad samayso, mudada iyo waqtiga.
Fadlan dooro nooca koorsadaada:*
Ingiriisi guud - 15 Saacadaha waxbarashadaIngiriisi degdeg ah - 21 Saacadaha waxbarashadaKusininka habeenkii - 6 saacadaha waxbarashadaIELTS Casharka Habeenka - 6 saacadaha saacadahaKooraska Bilawga Bilawga ah - 4.5 saacadaha saacadaha Input aan saxnayn
Fadlan dooro koorsada aad rabto inaad ku biirto.
Goormaad jeceshahay inaad bilowdo? Caadi ahaan waa isniinta*
Maalinta01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 / Month010203040506070809101112 / Year20192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204220432044204520462047204820492050 Input aan saxnayn
Goormaad jeclaan lahayd inaad dhammaysato? Caadi ahaan waa tan Jimce ah*
Imisa todobaad ayaad jeceshahay inaad waxbarto?*
Imisa sano ayaad baratay Ingiriisi:
Imtixaankee ingiriisiga ah ee aad ka gudbisay?
Maxay yihiin ujeedooyinkaaga koorsada?
Tusaale ahaan: Imtixaanada aad rabto inaad qaadato (PET, FEC, CAE, CPE, IELTS?) Ama isgaarsiinta guud.
Waxaan bixinnaa hoyga xaafadda ama waxaad qaban kartaa adiga keligaa aad ku joogtid UK.
Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan martigeena iyo noocyada hoyga fadlan booqo boggaga xaafadda.
Waxaad ku iman kartaa gurigaaga xaafadaada Sabtida ama Axada kahor inta aan kooraskaagu bilaabmin.
Fadlan dooro hoygaaga*
Guddiga BadhigaSariir iyo quraacSelf-CateringDeggan / YMCA (Jaamacad)Hoygaaga gaarka ah Input aan saxnayn
Ogsoonow: Hoyga / YMCA (arday hore oo jaamacadeed) waa hoy ku meel gaar ah oo keli ah oo keli ah oo loogu talagalay koorsooyinka bilaha 7aad-8aad.
Haddii aad diyaarineysid hoygaaga fadlan na sii cinwaanka:
Goorma ayaad jeclaan lahayd inaad timaado hoygaaga? Badanaa waa axad
Goormaad jeclaan lahayd inaad ka baxdo hoygaaga? Caadi ahaan waa Sabti
Sigaar ma cabtaa?
Fadlan ogsoonow: Mid ka mid ah hoygeyaga guryaha ayaa u oggolaanaya dadka sigaarka cabba inay sigaar ku cabaan guriga dhexdiisa.
Fadlan noo sheeg wax kasta oo xasaasiyadeed ama wixii kale ee caafimaad ama nafaqeyn kale oo gaar ah:
Lacagaha iyo Lacag bixinta
Waqtiga codsiga waxaa laga yaabaa inaad bixiso deebaajis ama lacago buuxa.
Dakhliga ugu dambeeya ee aan la soo celin karin waa lacagta todobaadka ee 1 + 1 hoyga isbitaalada + qiimaha kirada guryaha GBP 50.
Haddii aad dooratid inaad bixiso dhammaan khidmadahaaga waxaad ku xisaabtamaysaa sida soo socota: Lacagta todobaadka (wax ka yar sicir-dhimis) + hoyga toddobaadkii + GBP 50
Waxaad ku bixin kartaa Kaarka Amaahda, Bank Tansfer, Check ama Cash.
Fadlan fiiri 'Sidee loo Isku qoraa'bogga macluumaadka bangiga iyo sida loo bixiyo credit card.
Ma bixisaa deebaaji ama lacago buuxda hadda?*
Fadlan qor intaad hadda bixiso:
Anigu waxaan xaqiijinayaa in aan doonayo in aan wax ku barto Dugsiga Dhexe ee Bartamaha, Cambridge taariikhda la siiyay. Waxaan aqriyay oo waan aqbalay dhammaan shuruudaha iyo shuruudaha ku yaal foomkan iyo buug yaraha / bogga. Waxaan ku jiraa caafimaad wanaagsan mana laha naafonimo maskaxeed ama naaso aan ahayn marka lagu faahfaahiyo waraaq gaar ah ama email.
Fadlan sax (sax) si aad u xaqiijiso inaad ku raacsan tahay qoraalka kore*
Waan ogolahay, fadlan aqbal foomka diiwaangelinta! Input aan saxnayn
Anigu waxaan xaqiijinayaa in aan akhriyey sharciga Qarsoodiga Khaaska ah.
Fadlan sax (sax) si aad u xaqiijiso inaad akhrido Qorshaha Qarsoodiga Khaaska ah CLS*
Waxaan aqriyay Qorshaha Qarsoodiga ee CLS Input aan saxnayn
Fadlan gali waxa aad aragto*
Adiga oo qaadanaya wakhti aad sidaan sameyso, waxaad cadeyneysaa inaad tahay qof dhab ah. Mahadsanid.